Mizzima TV Weekly, Business News No .9(Sat2March , 2013) | OurGoldenNews.com
Mizzima TV Weekly, Business News No .9(Sat2March , 2013)
အပတ်စဉ် စီးပွားရေးသတင်း (၉)
ဒီတပတ်အတွက် တင်ဆက်ပေးသွားမယ့် သတင်းတွေထဲမှာတော့ ရန်ကုန်မြို့ပေါ်က တက္ကစီ အငှားယဉ်များလာပြီးတဲ့နောက် ဘာတွေဖြစ်လာနေပြီလဲ၊….. အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေအတွင်း ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀င်လာရင် ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ၊….. တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်ရေး အားကောင်းလာမယ့်အချိန်အတွက် မိုဘိုင်း ဟန်းဆက် ဈေးကွက်အကြောင်း .. စတဲ့ သတင်းတွေကို တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးရ စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုလည်း တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။